Shiinaha ASS Customized 10 inch heerka buugga tusmada video kaarka ganacsi shaqo jeebka loogu talagalay xayeysiinta ganacsiga Soo-saar iyo Warshad | Buug-gacmeedka
ASS Customized 10 inch heerka buugga tusmada video kaarka ganacsi shaqo ee xayeysiinta ganacsiga
Ku MUUQAALKA VIDEO ama KAARKA VIDEO waa baakad daabacan oo leh shaashad LCD ah oo mirco-khafiif ah, looxyada PCB, waranleyda iyo batteriga lithium ee dib loo soo celin karo oo ay la socdaan xiriir USB ah oo u oggolaanaya beddelka fiidiyowga iyo dib u soo buuxinta qalabka.
Buug-yaraha fiidiyowga ee kaarka fiidiyowgu wuxuu ku fiican yahay soo-bandhigidda, dallacsiinta, xayeysiinta, arooska, salaanta, casuumaadda iyo qoraaga ama hordhaca shirkadda.
Maxay u shaqeeyaan buug-yaraha fiidiyowga?
Sababtoo ah waxay yihiin kuwo aad u mashquulsan oo is dhexgal ah, waxay la yaabaan si la yaab leh ...
Daabacaadda & fiidiyowgu si aad ufiican ayey uwada shaqeeyaan si wada jir ah maadaama ay yihiin kuwo la qaadi karo oo dareen badan leh. adoo siinaya ololahaaga meel aad u ballaaran.
Xusuusta & Waqtiga Ciyaarta Video (Qiyaas & hage kaliya):
Ciyaarta waxaa lagu dhaqaajin karaa bilowga otomaatigga furitaanka, shidida ama daminta, ama, dareeraha dhaqdhaqaaqa. Fiidiyowyadu way soo celin karaan (wareejin karaan), ama waxay ku sii jiri karaan heeganka mar haddii loo dhammaystiro dib u ciyaarista. Ilaa 4 saacadood oo fiidiyow ah ayaa lagu keydin karaa hal buug-yare.
128 MB (illaa 7 min), 256 MB (illaa 15 min), 512 MB (illaa 30 min), 1 GB (illaa 60 min), iyo wixii la mid ah *** Waqtiga ciyaarta waxay ku xiran tahay fiidiyoowga iyo qaab loo adeegsaday.
Lithium Polymer dib loogu shubi karo 500 MA oo leh 4 saacadood oo isdaba joog ah. Baytariyada waaweyn ilaa 8000 mA ayaa la heli karaa.
Boot Up / Logo Screen:
On / off, video xul, ciyaaro / hakin, ku xiga / FF, prev / REW, mugga kor u, mugga hoos. Waxaad haysan kartaa ilaa 10 badhan.
Waxaa laga heli karaa shaashadda 4.3in, 5.0in, 7.0in, & 10.1in. Taabo xakamaynta mugga & faylasha faylasha.
Badanaa astaan ​​shirkadeed ama shay soosaar oo soo muuqan doona 1-2 ilbidhiqsi inta fiidiyowgu kor u kacayo. Ama, shaashadda calaamaddu waxay ku sii jiri kartaa heeganka illaa badhanka fiidiyowga laga doorto.
Hore: Buug-gacmeedka Astrazeneca 7inch ee daabacan ee adag ee fiidiyowga ganacsiga oo leh jeebka kaarka ganacsiga
Xiga: Qoraalka yar ee shaashadda muuqaalka ah ee 'LCD' ee sawir gacmeedka baakidhka hadiyad qaadashada kaarka salaanta
Dabaqa 43 inch taagan adver muraayad sixir sixir ...
IDW Xayeysiinta BMW Car version 7 inch LCD Vide ...